Izici nokwazi kwezigaba zenyanga | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Impela sonke siyakwazi okuhlukile izigaba zenyanga edlula ngayo phakathi nenyanga (umjikelezo wezinsuku ezingama-28). Futhi ukuthi kuya ngosuku lwenyanga esikuyo singabona ngeso lengqondo isathelayithi yethu ngenye indlela. Hhayi endaweni efanayo kuphela phakathi nezinsuku, kepha futhi kuya ngesizinda esikhona. Izigaba zenyanga zimane nje ziyizinguquko endleleni ekhanyisa ngayo lapho ibukwa eMhlabeni. Izinguquko ziyindilinga futhi zincike esimweni esifanayo ngokuphathelene noMhlaba neLanga.
Ngabe ufuna ukwazi ngokuningiliziwe zithini izigaba zenyanga futhi kungani zenzeka? Kulokhu okuthunyelwe uzothola lonke ulwazi oludingekayo 🙂
1 Ukuhamba kwenyanga
2 Umjikelezo wenyanga
3 Izigaba ezahlukahlukene zenyanga
3.1 Inyanga entsha
3.2 Crescent inyanga
3.3 Ikota yeCrescent
3.4 Inyanga e-gibbous ekhanyayo
3.5 Inyanga egcwele
Isathelayithi yethu engokwemvelo iyazizulela yona, kodwa futhi ijikeleza ngokuqhubekayo emhlabeni. Okuningi noma ngaphansi Kuthatha cishe izinsuku ezingama-27,3 ukuzungeza uMhlaba. Ngakho-ke, kuya ngesikhundla esisithola sikuso maqondana neplanethi yethu kanye nesimo sendawo esime kuyo maqondana neLanga, kunezinguquko ezenzeka ngendlela esiyibona ngayo. Yize iqiniso lokuthi inyanga kwakucatshangwa ukuthi inokukhanya kwayo, njengoba kungabonakala njengenye yezinto ezikhanya kakhulu esibhakabhakeni sasebusuku, lokhu kukhanya kumane nje kungukukhanya kwelanga.
Njengoba umzila wenyanga uqhubekela phambili, ukuma kwawo kuyashintsha kusuka kumqapheli woMhlaba. Kwesinye isikhathi ungabona kuphela isigaba salo esincane, kwesinye isikhathi kungabonakala ngokuphelele, futhi kwesinye isikhathi akusikho nje. Ukwenza kucace, inyanga ayishintshi ukuma, kepha yimiphumela yokubuka kuphela evela ekuhambeni kokufanayo nelanga elibonwa ngaphezulu. Lawa ngama-engeli lapho izingqapheli eMhlabeni zigcina khona ingxenye ekhanyayo yendawo yakho.
Kungenzeka ukuthi eSpain sinenyanga egcwele, kuyilapho i-United States iyaxhuma noma incipha. Konke kuncike ekutheni sibheke kuphi inyanga eMhlabeni.
Isathelayithi inezixhumanisi zamaza nomhlaba wethu. Lokhu kusho ukuthi ijubane lokujikeleza kwalo lihambisana nesikhathi se-orbital. Ngenxa yalokhu, noma inyanga nayo ijikeleza ngokuqhubekayo kwi-eksisi yayo njengoba izungeza umhlaba, sihlala sibona ubuso benyanga obufanayo. Le nqubo yaziwa njengokujikeleza okuvumelanisiwe. Futhi kungukuthi, noma ngabe sibheke kuphi enyangeni, siyohlala sibona ubuso obufanayo.
Umjikelezo wenyanga uhlala cishe izinsuku ezingama-29,5 phakathi kwazo zonke izigaba zingabonakala. Ekupheleni kwesigaba sokugcina, umjikelezo uqalwa phansi. Lokhu kwenzeka njalo futhi akupheli. Izigaba zenyanga ezaziwa kakhulu yilezi ezi-4: inyanga egcwele, inyanga entsha, ikota yokugcina nekota yokuqala. Yize baziwa kakhulu, kukhona abanye abaxhumanisi nabo ababalulekile futhi abajabulisayo ukwazi.
Iphesenti lokukhanyiswa kwenyanga esibhakabhakeni liyahlukahluka njengoba izimo zilandelana. Iqala ngokukhanyisa okungu-0% lapho inyanga isisha. Lokho wukuthi, asikwazi ukubona lutho esibhakabhakeni. Kusengathi inyanga inyamalale esibhakabhakeni sethu. Njengoba izigaba ezahlukahlukene zenzeka, iphesenti lokukhanyisa lenyuka lize lifike ku-100% enyangeni egcwele.
Isigaba ngasinye senyanga sihlala cishe izinsuku eziyi-7,4. Lokhu kusho ukuthi isonto ngalinye lenyanga sizoba nenyanga cishe esimweni esisodwa. Njengoba umzila wenyanga uyindilinga, lesi sikhathi nobubunjwa kuyahlukahluka. Ngokuvamile, zonke izigaba zenyanga ezinokukhanya okuningi zihlala izinsuku eziyi-14,77 futhi ziyafana kulezo zigaba ezimnyama.
Izigaba ezahlukahlukene zenyanga
Ngaphambi kokuqala ukuchaza izigaba zenyanga, kubalulekile ukugcizelela ukuthi izigaba esizoziqamba ziyindlela nje yokubona inyanga ukusuka endaweni esikuyo emhlabeni. Ngesikhathi esifanayo, izingqapheli ezimbili ezisezikhundleni ezehlukene eMhlabeni zingabona inyanga ngokwehlukile. Akukho okunye okuqhamuka eqinisweni, isibukeli esisenyakatho Nenkabazwe singabona inyanga ngokuhamba ukusuka kwesokudla kuya kwesobunxele nasenkabazwe eseningizimu isuka kwesobunxele iye kwesokudla.
Lapho sesikucacisile lokhu, siqala ukuchaza izigaba ezahlukahlukene zenyanga.
Kuyaziwa nangokuthi inyanga entsha. Kulesi sigaba, isibhakabhaka sasebusuku simnyama kakhulu futhi kunzima ukuthola inyanga kumnyama. Ngalesi sikhathi, uhlangothi olude lwenyanga esingakwazi ukulubona lukhanyiswa yilanga. Kodwa-ke, lobu buso abubonakali eMhlabeni ngenxa yokujikeleza okuvumelanisiwe okukhulunywe ngenhla.
Kuzo zonke izigaba inyanga edlula kuzo, kusuka kokusha kuya kokugcwele, isathelayithi ihamba amabanga ayi-180 omjikelezo wayo. Ngalesi sigaba ihamba phakathi kuka-0 no-45 degrees. Singakwazi kuphela bheka phakathi kuka-0 no-2% wenyanga uma isha.
Kuyisigaba lapho singathola khona inyanga isondela ngemuva kwezinsuku ezi-3 noma ezi-4 emva kwenyanga entsha. Ngokuya ngokuthi sikuphi eMhlabeni sizokubona kusuka ohlangothini lwesibhakabhaka noma kolunye. Uma siseNyakatho Nenkabazwe, sizoyibona ngasohlangothini lwesokudla futhi uma siseNingizimu Nenkabazwe sizoyithola ohlangothini lwesobunxele.
Kulesi sigaba senyanga singabonwa ngemuva kokushona kwelanga.Ngakho-ke ihamba phakathi kwamazinga angama-45 nama-90 omzila wayo phakathi nalesi sigaba. Iphesenti elibonakalayo lenyanga kulolu hambo ngu-3 kuya ku-34%.
Kulapho kukhanya uhhafu wediski yenyanga. Kungabonwa kusukela emini kuze kube phakathi kwamabili. Kulesi sigaba sihamba phakathi kuka-90 no-135 degrees we-orbit futhi siyayibona ikhanya phakathi kuka-35 no-65%.
Inyanga e-gibbous ekhanyayo
Indawo ekhanyisiwe ingaphezu kwengxenye. Lishona ngaphambi kokuphuma kwelanga futhi lifinyelele esiqongweni salo esibhakabhakeni kusihlwa. Ingxenye yenyanga ebonakalayo iphakathi kuka-66 no-96%.
Kuyaziwa nangokuthi inyanga egcwele. Sisesigabeni lapho inyanga ibonakala khona ngokugcwele. Lokhu kwenzeka ngoba iLanga neNyanga kuqondaniswe cishe ngqo noMhlaba enkabeni yawo.
Kulesi sigaba sisesimweni esiphambene ngokuphelele nesokwethwasa kwenyanga ngama-degree ayi-180. Kungabonakala phakathi kwenyanga okungu-97 kuya ku-100%.
Ngemuva kwenyanga egcwele, izigaba ezilandelayo ezihambisanayo yilezi:
Inyanga e-gibbous eshonayo
Zonke lezi zigaba zinezici ezifanayo nezamakhosenti, kepha ijika liyabonakala ngakolunye uhlangothi (kuya ngesimo sendawo lapho sikhona). Ukuqhubeka kwenyanga kwehle kuze kube yilapho ifinyelela enyangeni entsha futhi umjikelezo uqalwa phansi.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi izigaba zenyanga sezicacile.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isayensi yezinkanyezi » I-Fases de la luna
Umjikelezo wamanzi noma umjikelezo wamanzi